BlizzcOnline 2021 - Tontolon'ny fanontaniana momba ny World of Warcraft | BlizzCon, Vaovao, faritra alokaloka | WoW Guides | WoW mpitari-dalana
BlizzcOnline 2021 - Tontolon'ny fanontaniana momba ny ady amin'ny Warcraft
Adrian Da Cuna | | Blizzcon, About us, shadowlands
Rehefa nandalo an'i Uther i Anduin, dia takatr'i Uther ny hery mifehy an'i Anduin, nanako tao amin'ny ratrany.
Ny ady nataon'i Syauinaas dia ho iray amin'ireo adin-tantara mahatsikaiky indrindra nataon'ny WoW, hahitana singa ao amin'ny tantarany iray manontolo, hatramin'ny lasa Ranger ka hatrany Banshee.
Rehefa avy any Classic mankany TBC aho, rehefa manao klone, inona no hitranga amin'ireo entana amam-bolamenako?
Rehefa mandeha ivelan'ny patch ny mpizara alohan'ny patch, dia horaisina eo noho eo ireo tarehin-tsoratra. Rehefa miverina ny mpizara dia tsy maintsy misafidy izay hatao ny mpilalao. Raha misafidy ny hilalao TBC izy ireo dia hiditra fotsiny ary hanohy hilalao. Raha misafidy ny hijanona amin'ny Classic ianao dia tsy maintsy manokatra ny client Classic ary milalao eo. Ny fanjakana dia hisy na amin'ny TBC na amin'ny Classic, koa hisy ny Deal an'ny Dragon's Rest amin'ny TBC sy Classic. Aorian'ny fisafidianana ny Klasika dia azonao atao ny mandoa ny toetranao, ny volamena ary ny entanao hisy ao amin'ny mpizara TBC sy Classic.
Ahoana ny fomba hitondrana ny isan'ny isan'ny mponina ao amin'ny TBC? Faritra kely sy dingana.
Misy ny faniriana hamerina ireo faritra azo tratrarina. Fa izy ireo koa dia te-hahazo antoka fa mahafinaritra ny traikefa.
Nanao fanatsarana izy ireo mba hahazoana antoka fa milamina kokoa ny zavatra toy ny AQ.
Toy ny Classic, hizaha olana manokana toy ny Black Lotus izy ireo.
Misy hazakazaka / kilasy hafa ve?
Ny safidin'ny mpilalao dia olana lehibe amin'ny fanitarana ary indrindra amin'ny fanaingoana.
Nodinihin'izy ireo tsindraindray ny fitambarana karazany / kilasy. Amin'izao fotoana izao dia mieritreritra izy ireo fa efa lasa lavitra, saingy tsy nilaza mihitsy na oviana na oviana.
Inona no nanjo ny Archon?
Tafavoaka velona amin'ny fanafihana.
Raha niresaka tamin'i Terran Gregory izy ireo dia te hampiditra fanondroana fa velona ao anaty horonantsary izy mba hahitanao ny fihetsiky ny tànany.
Mikasa ny hamaha ny tsy fifandanjan'ny vondrona ve ianao atsy ho atsy?
Ity dia zavatra iray resahintsika matetika, indrindra amin'ny faran'ny Mythic + sy ny tarika.
Ity dia zavatra iray izay nanjary olana mitombo.
Tany am-boalohany dia olana ara-poko roa izy ireo tamin'ny fanitarana teo aloha, fa amin'izao fotoana izao dia voalanjalanja ny firazanana ary mety ho matanjaka kokoa ny Alliance, saingy izao ny olana dia ny dinam-piarahamonina ary mila vahaolana.
Laharam-pahamehana ho antsika izy io, saingy tsy misy zavatra ambara amin'izao fotoana izao.
Nanontany izahay hoe aiza ny fetran'ny fizarana. Izahay dia efa manana ny maody mpikarama an'ady, saingy tian'izy ireo ho azo antoka fa zava-dehibe ny maha-izy azy sy ny ankolafy ka rehefa misy mangataka amin'i BlizzCon hanohana ny ankolafy misy anao dia mitohy ny fisian'izany.
Mandanjalanja ny fihetsika fa amin'ny hetsika toa ny Mythic + na Raids dia tsy mahay mandanjalanja.
Hotehirizina ao amin'ny Classic ve ny anaranao raha milalao TBC ianao?
Ho tonga eo no ho eo izy rehefa mandeha ivelan'ny serivera ny mpizara.
Raha manapa-kevitra ny hanao klona ianao dia hanana izany anarana izany amin'ny sehatra roa, fa mety manana fitaovana mamela ny famahana olana amin'ny anarana iray ianao.
Hisy famindran-toerana be dia be any amin'ireo fanjakana be mponina ve? Misy drafitra bebe kokoa ho an'ny fanjakana mifandray?
Manana fitaovana mandinika ny fanjakana rehetra izy ireo, ahafahan'izy ireo mitady data momba ny lazany sy ny fifandanjan'ny fizarana.
Ny fandefasana Shadowlands no laharam-pahamehana.
Shadowlands dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny mponina, ka naniry ny hiandry aorian'ny fandefasana izy ireo alohan'ny hanaovana faniriana.
Tsy ho vitan'ny Horde sy ny Alliance mihitsy ve ny miara-manao tranomaizina na manafika?
Tsy manilika izany izy ireo fa tsy manamafy.
Zava-dehibe ny hitehirizana ny mombamomba ny Horde sy ny Alliance, fa ny World of Warcraft dia ny filalaovana ny namanao.
Afaka miady amin'ny Alliance amin'ny kianja filalaovana izao ny Alliance.
Hampitomboina ve ny isan'i Anima avy eo? Havela amin'ny kaonty iray manontolo ve ny fanavaozana an'i Curia?
Nanitsy ny teboka anime nanafika izy ireo.
Amin'ny ankapobeny, mijery ny vidiny izy ireo fa ny kosmetika kosa dia mandrakotra ny kaonty iray manontolo, toa ny fanaingoana tarehy.
Ny fandrosoana dia natao hanitatra ny Shadowlands iray manontolo.
Hahita an'i Denathrius indray ve isika?
Toa an'i Bwonsamdi, ampahany amin'ny fanehoan-kevitry ny fiarahamonina izany satria niverina i Bwonsamdi noho ny fitiavan'ny vondrom-piarahamonina azy.
Natao hanana andraikitra kely izy, ary henon'izy ireo ny feon'ilay mpilalao sarimihetsika, tian'izy ireo ilay mpilalao ary novelominy izy mba hitazomana bebe kokoa ny tantarany.
Mety misy mpiara-dia aminy izay mety te hanafaka azy.
Rahoviana isika no hahita fitaovam-piadiana mahery vaika kokoa?
Tena ho avy izy ireo ary faly izy ireo mizara izany amin'ny mpiara-monina.
Mikasa ny hitondra ny lavanty amin'ny rindranasa finday ve ianao?
Tsy araka ny ahalalanao azy. Rafitra mandeha ho azy maro no nampiasaina. Na izany aza, eken'izy ireo ho toy ny antony mahamety azy izany, ahafahanao miantsena rehefa manam-potoana voafetra ianao.
Vitsy dia vitsy no nampiasa ny fampiharana finday araka ny niniana.
Hisy fanamboarana toetra bebe kokoa ao Shadowlands?
Tsy hisy fanaingoana olona intsony ao Shadowlands.
Inona avy ireo fepetra takiana marina ahafahana manidina any Shadowlands?
Tsy mila laza izany fa mila mamita ny fampielezan-kevitra any Curia fotsiny.
Tsy afaka manidina isaky ny faritra ianao. Tsy faritra tsy mifanakaiky ireo.
Raha manidina eo anelanelan'ny faritra ianao dia mety haharitra 30-40 minitra.
Azonao atao ny manidina avy hatrany ho any amin'ny haavo 50 raha vao manokatra azy ianao.
Ao amin'ny TBC ve hisy fanitsiana kilasy?
Amin'ny ankapobeny, tsia. Tianay ny hitazona ny tena fototr'ilay Fandoroana azy miaraka amin'ny kinova farany an'ny Burning Crusade.
Hisy hery vaovao ve any Torghast ho an'ny patch any aoriana?
Eny, toy ny topy topy maso an'i Shadowlands.
Fanitsiana efa mandeha ao amin'ny 9.0.5 PTR.
Hisy hery vaovao amin'ny patch 9.1.
Ahoana ny fomba fiasa eo anelanelan'ny Shadowlands sy Azeroth?
Misy endri-tsoratra maromaro izay toa tsy misy dikany firy ny fotoana.
Hieritreritra ny hamerina atiny ho an'ny olona 10 ve ianao?
Raha mikasika ny atiny hanafika, ny lafiny teknika dia atin'ny mpilalao 10 ny zava-drehetra. Fa ny mpilalao sasany dia maniry ny Mythics amin'ny vondrona kely.
Izy io dia ireo mega-dungeons 5-mpilalao izay manatanteraka io andraikitra io amin'izao fotoana izao.
Hanomboka amin'ny TBC ve ireo vato miantso?
Eny, ho hita amin'ny fandefasana azy ireo.
Fa maninona i Bolvar ary mankaiza ny tantarany?
Iray amin'ireo zavatra nahafinaritra tamin'ny Shadowlands izany, namerina an'i Bolvar hihetsika.
Nisy vidiny handoavana ireo fahitana ireo hahitana ny zava-mitranga amin'i Sylvanas sy Anduin.
Ianao no ho lohalaharana amin'ny Chains of Domination.
Ahoana no fomba fiasan'ny lohateny PvP ao amin'ny TBC raha tsy misy vondrona mpiady?
Ireo vondrona ady tany am-boalohany dia vokatry ny fameperana tany am-boalohany, izay nanakana ny lalao teo amin'ny vondrona mpiady.
Midika izany fa olona 13 ihany no nanana anaram-boninahitra tany Amerika.
Koa satria tsy misy intsony io fameperana io dia mikasa ny hanome izany ho an'ny olona kely vitsivitsy ao an-tampony izy ireo. Olona mihoatra ny 1, fa vitsivitsy voafantina.
Mety hamboarina indray ve i Teldrassil?
Ny famotehana an'i Teldrassil dia famaranana ary maro ny aina nafoy tao. Tsy zavatra tian'izy ireo hamboarina amin'ny filan'ny nofo izany.
Mbola tsy vita ny tantaran'ny zava-nitranga tamin'ireo Night Elves tao, izay nampitaina tao amin'ny Maw.
Iza no tena mirotsaka amin'ity tantara ity dia i Tyrande.
Hisy mpizara Klasika vaovao ankoatry ny TBC?
Tsy handefa mpizara vaovao izahay.
Izahay dia mijery izany ary hiresaka izany aorian'ny famoahana ny TBC.
Ahoana ny fomba ahazoana ny tendrombohitra Wandering Ancestor?
Tian'izy ireo ny hamerina fanomezana ho an'ny mpilalao rehetra, noho izany ny ati-doha dia nanisy ati-doha hevitra ary nametraka azy ireo tamin'ny latsa-bato.
Ny nandresy dia ny Wandering Ancestor, ka ny hany takiana dia tsy maintsy manana Shadowlands ianao.
Ny Wandering Elder dia ho hita amin'ny patch 9.0.5 amin'ny volana manaraka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » Blizzcon » BlizzcOnline 2021 - Tontolon'ny fanontaniana momba ny ady amin'ny Warcraft
Flavour vaovao an'i Azeroth: ny Cookbook ofisialy mivoaka ny 18 Mey
Twitch dia mamono ny hira BlizzcOnline "Ho An'iza Ny Bell Toll" ..... nolalaovin'i Metallica mihitsy